Tikrit oo noqotay dhib qabsashadeeda - BBC Somali
Tikrit oo noqotay dhib qabsashadeeda
Image caption Ciidamada Ciraaq ayaa bilaabay inay dib u qabsadaan magaalooyinka ISIS ay ka qabsatay.
Wararka ka imaanaya Ciraaq ayaa sheegaya, ciidamada dowladda ee isku dayaya inay kala wareegaan magaalada Tikrit maleeshiyada Suniyiinta, inay dib ugu noqdeen magaalada Dijla, ee labaatan iyo shan kilometer koonfurta Tikrit, kadib markay ku guuldatraysteen weerar ay isticmaaleen taangiyo, diyaarado iyo babuurta hubaysan.
Sida ay wararka sheegayaan dagaal culus ayaa labada dhinac qasaaro ay kala gaysteen. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay ku adkaatay inay gaaraan bartamaha Tikrit, sababtoo ah maleeshiyada ISIS ayaa jidka dhigay miinooyin.
Ciraaq ayaa waxaa soo gaaray diyaaradaha dagaalka Sukhoi, qaybtii ugu horaysay oo uga yimid Ruushka.
Wasaarada gaashaandhiga ayaa sheegtay in diyaarada ay howlgali doonto maalmo gudaheed, qaar kalena ay iman doonaan.